Google informed employees to return to office in May. ﻿
Google informed employees to return to office in May.
Google မှ ဝန်ထမ်းများအား မေလတွင် အလုပ်ပြန်ဆင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးခဲ့
Google မှ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် သူတို့အနေနဲ့ အချို့သောဝန်ထမ်းများကို လာမည့်လအတွင်း ရုံးပြန်တက်ခွင့်ပြုသွားဖို့ စီစဉ်လျှက်ရှိကြောင်း အသိပေးလာခဲ့ပါတယ်။ New York Times မှ‌ email တစ်စောင်အပေါ် အခြေခံ၍ ရေးသားထားသော သတင်းတစ်ပုဒ်တွင် “ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ Google မှ ဝန်ထမ်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းရှိရုံးခန်းများသို့ မိမိသဘောဆန္ဒအလျှောက် ပြန်လည်လာရောက်၍ ရုံးတက်နိုင်စေဖို့ ပြုလုပ်သွားရန်ရှိနေပါတယ်” ဟူ၍ ပြောဆိုထားကြောင်း ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
The Verge သို့ Google မှ ပြောကြားချက်များအရ ရုံးခန်းများကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသေးစိတ်အကြောင်းအရာများဟာ “ကာကွယ်ဆေးများ ကျယ်ပြန့်စွာရရှိနိုင်မှုနဲ့ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းများ လျော့ကျလာမှု အစရှိတဲ့ အခြေအနေများအပေါ်မူတည်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။” သို့သော်လည်း ရုံးတက်လိုသူဝန်ထမ်းများအား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားဖို့ကို လိုအပ်ချက်တစ်ရပ်အနေနဲ့တော့ သတ်မှတ်ထားမှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့လည်း ဆိုထားခဲ့ပါသေးတယ်။
Google ရဲ့ return strategy ကို စက်တင်ဘာလဟု လက်ရှိတွင်သတ်မှတ်ထားပြီး ကုမ္ပဏီမှ ထိုအချိန်တွင် ကာကွယ်ဆေးများ ကျယ်ပြန့်စွာရရှိနိုင်ပြီး တူညီတဲ့အခန်းအကျယ်အတွင်း တစ်ချိန်တည်းတွင်ဝန်ထမ်းများများ နေထိုင်နိုင်ရန် လုံ့လောက်တဲ့လုံခြုံစိတ်ချရမှု ရှိလာနိုင်ဖို့ကိုလည်း မျှော်လင့်လျှက်ရှိနေပါတယ်။